Mutsva weUNWTO Deputy Secretary General, akasvika sei ikoko?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Georgia News » Mutsva weUNWTO Deputy Secretary General, akasvika sei ikoko?
Kuputsa Georgia News • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Spain Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • nhau • vanhu • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Iye murume akanaka, uye iko kuvandudzwa kukuru kweUNWTO, asi kuti akasvika sei ikoko anogona kunge anga ari chikamu chemutambo. Sekureva kweruzivo rwakatambirwa neTN Sources, UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili achangogadza Mumiriri weColombia Jaime Alberto Cabal semutevedzeri wake.
Izvi hazvina kusimbiswa zviri pamutemo neUNWTO.
eTN yakanga yagamuchira ruzivo nguva yadarika ndokufonera mumiriri Cabal munaKurume kuti vasimbise kana kuramba makuhwa aya. Mumiriri akaudza eTN kuti akange asina hurongwa hwakadaro hwekushandira UNWTO uye aingotaura neSG Zurab kamwe chete mushure mesarudzo. Akaudza eTN, akange asina chikonzero chekusiya chinzvimbo chake semumiriri weColombia kuAustria otamira kuMadrid kunotora chinzvimbo kuUNWTO.
Iyeyu eTN Source akataura kuti kugadzwa kwaitarisirwa kwaive chikamu chechibvumirano chakaitwa chinyararire pasati pasarudzwa Sachigaro-Mukuru weUNWTO. Kwayedza yakanga yaudza eTN panguva iyoyo chikonzero chete mumiriri Cabal achizvimhanyisa pachinzvimbo cheMunyori-Mukuru weUNWTO kwaive kutora mavhoti kubva kune vamwe vakwikwidzi uye kuti mavhoti aya adonhedzwe kuna Zurab uyo aikwikwidza kuGeorgia.
Danho iri rinogona kunge rakapa ruzhinji rwakakodzera kuZurab, saka akazokwanisa kuwana vazhinji muchikamu chechipiri chesarudzo. Mukudzoka Zurab yakanga yavimbisa mutevedzeri chinzvimbo kuna Ambassador Cabal. eTN yakanga yanzwa izvi kubvira Executive Committee yavhota rinopfuura gore rapfuura muMadrid. Cabal yakanga yaramba izvi paakataura neTN munaKurume.
Chinofadza zvakare chokwadi chevamwe vese vakakwikwidza vaive nechinzvimbo kuUNWTO vakasiya kana vakanzi vasiye sangano, uye Ambassador Cabal varimo.
Zvisinei, kugadzwa kwaCabal kunofanirwa kuonekwa sekufamba kwakanaka mushure mezvose. Cabal ine hunyanzvi uye sangano rinoda mutevedzeri akasimba kuti adzokere munzira. "Chokwadi chekuti VaCabal vanokwanisa kuwana vezvenhau voga mhepo inotambirwa uye iri kutobva kuMadrid," akadaro Juergen Steinmetz, muparidzi weTN.
Jaime Alberto Cabal ndiani?
Mutevedzeri mutsva weUNWTO Secretary General Jaime Alberto Cabal, aimbova Gurukota reColombia uye Mumiriri weColombia kuAustria, Croatia, Slovakia, Slovenia, Hungary, Montenegro, Czech Republic neSerbia vakatora nzvimbo dzakasiyana munzvimbo yemakambani neyemabhizinesi. Akafungidzira mabasa ehurumende pamwe nebasa rezvematongerwo enyika uye redzidzo achizvisiyanisa nehutungamiriri nekutungamira, akatarisana nekusikwa uye kushandurwa kwemasangano ane simba rakakura mukusimudzira hupfumi hwenyika, uye nehupfumi hwake, kuumba basa. , mikana yebasa nedzidzo.
Hunyanzvi hwake uye hunyanzvi hwehunyanzvi zvine hukama nekugadzirwa uye kuitwa kwehurongwa hweveruzhinji hwekuvandudza zvikamu zvine hungwaru uye hupfumi pamwe nekusimudzira nyika, kunyanya mubazi rezvemaindasitiri nerekushanya, uye zvine chekuita nekusika, set- kumusoro, kugadzirisa uye kuronga kwemasangano, masangano emabhizinesi nemakambani pamwe nekugadzirwa uye kuvhurwa kwezvirongwa, mapurojekiti nezviito zvinokanganisa zvikamu zvakasiyana nematunhu.
Muhupenyu hwake hwese, akashandawo semutungamiriri wemasangano ezvehupfumi kusimudzira maNGO muColombia, semutungamiri weColombian Small and Medium Enterprises Business Association - ACOPI, semukuru wekambani yeDanaranjo SA, uye semubatsiri mukuru weyaimbova European Economic Nharaunda mumunda wezvemagariro mapurojekiti kusimudzira bhizinesi nekugara muSpain uye, zvichidaro, muSwitzerland neEngland.
2. Dzidzo yepamusoro nehunyanzvi
Industrial Injiniya kubva kuJaveriana University muBogota nezvidzidzo muChirungu Mutauro neEconomy kubva kuGeorgetown University uye Master's Degree muEconomy kubva kuAmerican University muWashington DC Anobatawo madhigirii ekupedzisira mu Senior Management kubva kuLos Andes University uye Inalde Bhizinesi Chikoro muBogota DC Zvakare, iye akasarudzika muEmabhizimusi uye Management kweMabhizimusi madiki uye epakati-Akakura uye mune Management yeSocial Makambani kuYunivhesiti yeSouth Carolina, IE Bhizinesi Chikoro muMadrid uye kuComplutense University kuSpain.
Pamusoro peSpanish, kuburikidza nekudzidziswa kwake uye neruzivo rwehunyanzvi, anonyatsogona Chirungu semutauro webhizinesi.
Akaita zvakakosha mubasa rake rehunyanzvi zvine chekuita nerutsigiro rwemagariro, vezvemabhizimusi uye madiki mabhizinesi nekutanga zvirongwa senge microcredit, kuumbwa kwemakambani matsva uye kuunzwa kwemazano eruzhinji nekubatanidzwa kwavo padanho repasi rose.
SeGurukota rezvehupfumi, akakurudzira nekupasisa mitemo yakakosha yekusimbisa zvikamu nemakambani ari panjodzi, achinongedzera Mutemo 590 weRutsigiro rweMicro, Midiki uye Pakati Pakati, Enterprise, Mutemo 550 weSalvation uye Kugadzirisazve Makambani, uye Mutemo. 546 yeSocial Housing. Akasimudzirawo kugadzirwa kwemari uye zvirongwa zvidiki-diki pamwe nekubatana kwepasi rose nemasangano akakosha enyika dzakasiyana neUnited Nations, seUNIDO neUNPD pakati pevamwe.
Mumunda wekudyidzana, saMumiriri kuSouth Korea, akapa kurukurirano yeFree Trade Agreement pakati penyika mbiri, mukuwedzera kwekushandira pamwe nemabasa ebhizinesi mumunda wekutengeswa kweColombia nekutengesa nemakambani eKorea, uye ku kusimbisa kusimbisa kweEmbassy. KuAustria nenyika dzakawiriranwa, akazviparadzanisa nekukurudzira kuvhurwa nekuvhurwa kweMamishinari muColombia, nekuendesa mberi zvirongwa zvakakosha zvekudyidzana kunyanya mubhizinesi reColombia uye nekuisa mari muColombia nemakambani enyika idzi.
As Permanente Mumiriri weColombia kuUnited Nations Organisation nemamwe maInternational Organisation ari kuVienna, anomiririra zvido zvenyika kuUnited Nations Office paDrugs and Crime - UNODC, International Atomic Energy Agency - IAEA, neUnited Nations Industrial Development Office. - UNIDO, pakati pevamwe.
3.1 Muchikamu chekushanya
Kubudirira kwake uye mhedzisiro mune yekushanya chikamu chakakosha. Pasi pehutungamiriri hwake seMutungamiriri weColombian Hotel uye Tourism Association, akabatsira pakuumba zvirongwa zvitsva zvekusimudzira nekusimbisa chikamu ichi kubudikidza neMutemo 1101 nezve Tourism, kuburikidza nekusimudzira Mutemo 788 pamusoro peKubvisirwa Mutero kweKuvaka uye Kugadziridza kwe Mahotera, uye nekuvandudza iyo Colombian Tourism Promotion Fund - FONTUR. Akarongawo kubatanidza PROEXPORT, nhasi inozivikanwa sePROCOLOMBIA, kune kusimudzira kwenyika kushanya.
Kutanga kwezvirongwa zvakakosha zvekudyidzana nedzimwe nyika dzinopfuura gumi neshanu dzinoita zvirongwa zvekudzidzisa zvepasi rose kwevanopfuura mabhizinesi mazana mapfumbamwe nemapfumbamwe eColombia zvakazivikanwa zvikuru nevatungamiriri venzvimbo yekushanya. Iye anga ariwo mutangiri wemapurojekiti anotarisana nehunhu hwekushanya, kusimudzira kusimudzira, mahotera anoshanda zvakanaka, uye basa rezvemagariro.
Akamiririra chikamu chekushanya kumabhodhi makuru eProcrocombia, FONTUR uye Nyika Brand "Colombia es Pasión". Akashanda seMutungamiri weColombia Chamber of Tourism uye neIbero-American Hotel Association.
Nezve World Tourism Organisation: Mune chinzvimbo chake seGurukota, akabatsira pakuiswa kweColombia muOrganisheni, uye semutungamiri webhizimusi akabatsira mukusimudzira Colombia senzvimbo yekutambira ye17th UNWTO World Assembly, iyo yaipembererwa mu Cartagena muna 2007, uye mukati memakore akati wandei, akabata mutevedzeri wemutungamiri weSangano reNhengo Dzakabatana. Akarongawo uye akatora chikamu semudzidzisi mumisangano yakakosha uye foramu yeSangano.
3.2 Zvimwe zvakaitwa uye zvakaitwa
Akakokwa nenyika dzakasiyana seye chipangamazano uye mudzidzisi uye semubatanidzwa mumabhodhi emasangano eColombia nemakambani, achijekesa Colombian Stock Market, Caja Social Bank uye, padanho repasi rose, Executive Board yeCAF- Development Bank yeLatin America. Kwemakore akati wandei, aive nhengo yeColombian National Conciliation Commission for Peace. Nezvake zvaakawana uye zvaakawana, akagamuchira mvumo dzinoverengeka nemubairo nehurumende dzemuno nedunhu dzeColombia, iyo Colombian National Government pachayo, uye nemasangano epasi rese.